Nifanena indray izy ireo saingy tsy natao hiaraka mihitsy angamba. Rehefa niaraka an-taonany maro moa izy roa ireto dia nanapa-kevitra ny hivady. Vao valo volana izay no vita ny mariazin’izy ireo dia izao nisaraka izao satria samy hifantoka amin’ny asa maha-artista azy izy roaroa.
2. Efa roa taona izao no niaraka tamina lehilahy mpanao afera saodiana i Rihanna. Tsy mba mpisehoseho mihitsy izy ireo saingy tsy kely lalana ireo “paparazzi” any an-toerana. Fantatra mantsy fa niara-nisakafo tamin’ny renin’i Rihanna izy roa ireto. Porofo izany fa efa mandroso any amin’ny dingana ambony kokoa izy roa fa tsy hijanona eo amin’ny fiarahana miafina tsotra intsony.